निसी रुपकी चार सन्तानकी आमा दुईहप्ता देखी सम्पर्कविहीन ! – ebaglung.com
२०७४ बैशाख २९, शुक्रबार ११:१३	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार, विविध
बुर्तिवाङ २०७४ बैशाख २९ । बागलुङ जिल्लाको पश्चिम निसीखोला गाउपालिका- ५, साबिक निसी गाविस-२ रुपकी कुममायाँ बिक दुईहप्ता देखी सम्पर्कमा छैनिन् । अन्दाजी २५/२६ वर्ष उमेरकी कुममायाँको कोखबाट जन्मिएका ६/७ वर्ष मुनीका तीन छोरी र एक छोरा गरी चार सन्तान छन् । अहिले यी चार लालाबालाको बिचल्लीे छ । हजुर बा-आमाको साथमा भएपनि उनिहरुले आमाको काख खोजी रहेका छन् । राति रोएर, उज्यालो भयो कि बाटो हेरेर, कुरी बसेका हुन्छन् ।
चार लालाबालाको बिचल्ली देखेर ‘यति निष्ठुरीपनि आमा हुँदा रहेछन’ भनेर छरछिमेकीले कुरा काटीरहेका छन् । बैदेशिक रोजगारीको परिणति भएको कानेखुसी चलेको छ । उनि पोखरा गैछन, भनेको पनि सुनिन्छ । तर कसैले खुलेर बताएको अवस्था छैन । मानौँ समाजलाई सबै थाहा छ, तर बोल्दैन ।
कुममायाँ सम्पर्कविहीन भएको सूचना परिवारजनले प्रहरीमा दिईसकेको बताएका छन् ।
कुममायाँका ३३ वर्षिय श्रीमान रामबहादुर बिक (फुर्से) अहिले रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा छन् । उनी पाँच वर्ष पहिले रोजगारी गर्न साउदी अरब गएको भएपनि बेलाबेलामा घरमा आउने जाने गर्छन् । करीब एक वर्ष पहिले पनि उनी घरमा आएर साउदी अरब फर्केका हुन ।
उनले श्रीमती अर्कैसंग गएको आशंका गरेका छन् । आफन्तलाई फोन गरेर, भ्वाईस मेसेज पठाएर उनले बालबच्चाको बिचल्ली बनाएर आफुले कमाएर पठाएको तीन लाख रुपयाँ पनि लिएर अर्कैसंग गएको बताउने गरेका छन् ।
कुममायाँ कहाँ गईन ? किन गईन ? भन्ने रहस्य उनी फर्कि आएपछी मात्रै खुल्ला । प्रहरीले खोजविन गरिरहेको अवस्था छ ।
यसैवीच निसीखोला गाउपालिका- ५, साविक निसी गाविस- २ टाकुल डेराका तीन छोरीका बाबु २०/२२ वर्ष उमेरका बोमबहादुर बिक पनि दुई हप्ता देखी गाउँघरमा देखिएका छैनन् ।
कतै स्याल कराउने, कुखुरा हराउने त भएको छैन ?
निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल हुनसक्ने आशंकामा जोमसोममा हेलिकप्टरको खानतलासी !